မောင်ရစ် – အမေရိကန်တွေ စီးပွားပျက်နေကြပုံ ဘာလဲ ဘယ်လဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၄
(အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာလထုတ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
၂၀၀၉ မှာကတည်းက အမေရိကန်ပြည်ဟာ စီးပွားပျက်ကပ်ကို ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ အမေရိကန်သမတအကူးပြောင်းမှာ ယခင်သမတကြီး ဂျော့ခ်ျဘွတ်က သမတအသစ်ကြီး အိုဘားမားကို အကြွေးတင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးကိုပါ ထိုးအပ်ခဲ့လိုက်တာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အခု ၂၀၁၄ နှစ်မှာတော့ စီးပွားပျက်တာကနေ စီးပွားကြပ်တာလောက်အဆင့်ကို တိုးတက်လာပါတယ်။ ဦးမော့လာပြီလို့ အကဲခတ်တွေက ပြောကြာတာပေါ့ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ အမေရိကားကလူတွေ လက်တွေ့မှာ စီးပွားပျက်ကပ်ထဲ ဘယ်လိုကူးခတ်နေခဲ့လဲ ဆိုတာကို ရေးဦးလေ … တဲ့။ ပြည်တွင်းက စာဖတ်သူတွေက ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုများ စီးပွားပျက်ကပ်ထဲ နေခဲ့ကြသလဲဆိုတာ သိချင်တယ်တဲ့။ တဆိတ်ရှိ ခင်ဗျားတို့ဘ၀တွေက ဘ၀ပျက်နေတာတောင် ပင်လယ်ကမ်း သောင်ခြေမှာ အုန်းရည်စုတ်ရင်း ဂီတာတီးပြီး ငိုကြတဲ့ ဆင်ပိန်တော့ကျွဲ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလိုပဲများလား လို့ မေးကြလွန်းလို့ပါ … တဲ့။
အမေရိကားက သေဌေးတွေက စီးပွားပျက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတယ်။ စိတ်ကယောက်ကယက်တွေက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး မြင်မြင်ရာ သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ အရင်းရှင်ကြီးတွေက အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ဖြုတ်တယ်။ အလုပ်ပြုတ်တဲ့လူတွေက အစိုးရဆီက အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်တောင်းကြတယ်။ အစိုးရက စီးပွားရေး အားတိုးဆေးဖော်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်တိုက်ကျွေးတယ်။ ဒါကတော့ သတင်းစာတွေထဲက ထင်ရှားတာတွေကို မြန်မြန် သရုပ်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ်တွေ ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်စားလို့တဲ့။ ဟုတ်တယ်။ လူတွေကို ငွေချေးပြီးတော့ အဲဒီချေးငွေတွေကို စတော့တွေ၊ ရှယ်ယာတွေအဖြစ် ပုံပြောင်း၊ အချင်းချင်း ပြန်လှည့်ရောင်း၊ အဆိပ်အတောက်ရှိတဲ့ ချေးငွေအရင်းအနှီးပေါ့ဗျာ။ အတိုးများများရမယ် ဘာညာပေါ့။ ၀ယ်ရောင်းတွေနဲ့ ရှုပ်နေချိန်မှာ အိမ်ဝယ်ထားသူတွေက မတတ်နိုင်တော့ အိမ်တွေကို အရှုံးခံပြီး လက်လွှတ်တော့ သူတို့စတော့တွေ ရှယ်ယာတွေ ပြုတ်ကျ။
ဒါတွေက မြင်သာတဲ့ အကြောင်းတွေကို တိုတိုတင်ပြတာပါ။ တချို့တွေက အမေရိကားမှာ ဘာမှ မထုတ်လုပ်တော့ဘူး။ အီးကုံးစက္ကူက အစ မိတ်အင်ချိုင်းနား ဖြစ်နေတော့ အဲဒါကလည်း ပြည်သူတွေကို အလုပ်အကိုင် အရင်းအနှီး ပြည်တွင်းမှာ ရှားပါးစေတယ်တဲ့။ အော် … အိမ်သာကမုတ်ကြီးတွေကတော့ မိတ်အင် ယူအက်အေတွေချည်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လေးကလေးနဲ့။ ဒို့မြန်မာတွေ အိမ်ပြန်လက်ဆောင် ပြန်သယ်စရာကတော့ မိတ်အင်ယူအက်စ်အေ အ်ိမ်သာကြွေကမုတ်ကြီးတွေ ရှိသေးတဲ့အကြောင်း လက်တို့လိုက်ရဲ့။
ပြီးတော့ စွမ်းအင်နဲ့ လောင်စာမှာ ပြည်ပကို အားကိုးလာရတာ။ ရေနံကို မှီခိုလွန်းတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အပြောပဲရှိပြီး အလုပ်နဲ့ စံမပြနိုင်တော့။ ကဲ တိုတိုပြောကြပါစို့။ သူတို့ အမေရိကန်တွေ စီးပွားပျက်ကုန်ကြတယ် ဆိုကြပါစို့။ အသုံးကကြီးတော့ အကြွေးပဲရှိတယ်။ စုဆောင်းထားတာလည်း မရှိဘူးတဲ့။ တရုတ်ပြည်ကြီးနဲ့ အာရှသားတွေဆီမှာ အရင်းအနှီးတွေ ပြောင်းရွှေ့ကုန်တယ်တဲ့။
တဦးချင်းဆီ စီးပွားပျက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ
အမေရိကန်က အလုပ်သမားတဦးမှာ လစဉ်လစာထဲကနေ ပင်စင်၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အစိုးရအခွန်နဲ့ ပြည်နယ်အခွန်တွေကို ကြိုတင်ကောက်ယူ သိမ်းဆည်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီက လူမှုဖူလုံရေး (Social Security) နှင့် ကျန်းမာရေး (Medicare) က ရှေ့ကသွားနှင့်တဲ့ အနားယူသွားကြတဲ့ လူအိုတွေ၊ လူနာတွေကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်စင်ကတော့ သင့်စုငွေဖြစ်ပြီး ပင်စင်သွားရင် အတိုးနဲ့တကွ ထုတ်ယူခံစားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပင်စင်စုငွေ (Retirement, 401 (K)) ကို သင့်ရွေးချယ်ရာ ဘဏ်၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေက ထိန်းသိမ်းပြီး စတော့တွေ၊ ရှယ်ယာတွေမှာ မြုတ်နှံတိုးပွားအောင် စီမံပေးနေတယ် (လို့ ဆိုပါတယ်။)။ ကျန်းမာရေးအာမခံ (Medical Insurance) ကတော့ သင်နဲ့ သင့်မိသားစု ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနဲ့ ဆေးစာရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ (Federal & State Tax) အခွန်တွေကတော့ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်နယ်က သိမ်းယူပြီး သူတို့ အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်လုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးပါတယ်။
သည်တော့ အခွန်ပုံမှန်ဆောင်တဲ့ လူတဦးက အစိုးရဆီက ပြည်နယ်ဆီက သူရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖြစ် (Unemployment Benefit) အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်ကို ထုတ်ယူခံစားခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပထမ ၆ လကနေ ဒုတိယ ၆ လ အထိ ခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ တနှစ်အတွင်း အလုပ်ပြန်ရှာခွင့်ရတယ် လို့ ဆိုရမှာလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်နယ်တခုနှင့်တခုတော့ မတူဘူးပေါ့ခင်ဗျာ။ အဲဒီ အလုပ်သမားဖူလုံရေးဌာနက ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း အလုပ်ရှာတာ၊ သင်တန်းလေး ဘာလေး တက်တာတွေကို လုပ်ပြနေရမှ ထောက်ပံ့ကြေးက ၀င်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ချေးထားတဲ့ ငွေကြေးတွေ အားလုံးကို ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဆိုင်းသင့်တာ ဆိုင်း၊ လျော့ချသင့်တာ လျော့၊ လျော်သင့်တာ လျော်လို့ ရတယ်လို့လည်း ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ထို့အတွက် အဲဒီ ကူညီတဲ့ အေဂျင်စီတွေကို အားမနာတမ်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း အကူအညီတောင်းဖို့သာ လိုတာပါတဲ့။
အမေရိကန်တွေ တဦးချင်းစီ တမိသားစုချင်းစီ အလုပ်ပြုတ်ကြလို့၊ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျကြတဲ့ဆီမှာ သူတို့တွေ ဘ၀ပျက်ကြရတယ် ဆိုတာက ခုနင်က အထက်ကပြောသလို မလိုအပ်ပဲ အလွန်ဖောင်းပွထားတဲ့ အိမ်ကို အကြွေးနဲ့ ၀ယ်မိထားတာ၊ မော်တော်ကားအကြွေး ၂ စီး ၃ စီး လောက် ပိနေတာ။ သားသမီးတွေက တက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းစာရိတ်တွေ (ကျောင်းကြွေး) ပိနေတာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်လို့ တချို့က ဆိုကြပါတယ်။ အခြားအသုံးစာရိတ်တွေ ပိနေတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ပြီးတော့ အိုစာမင်းစာအတွက် ၀ယ်ယူ စုဆောင်းထားတဲ့ အသက်အာမခံတို့၊ စတော့တို့ ရှယ်ယာတို့၊ ရင်းနှီးတာတွေ ဈေးပြုတ်ကျကုန်လို့၊ အဲဒီအေးဂျင့်တွေ ကုမ္မဏီတွေ စီးပွားပျက်ကုန်လို့ဆိုရင်တော့ တပူပေါ် နှစ်ပူ ဆင့်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ စုထားသမျှတွေ အရေးပေါ်ထုတ်သုံးဖို့အတွက် မကျန်တော့ရင်တော့ ဒုက္ခပေါ့။ ပြန်စစ်ကြည့်ကြပါဦးဗျို့။
အလုပ်ရှင်ကလည်း လုပ်ငန်းအရှုံးပြနေချိန်၊ သို့မဟုတ် မပြုတ်ခင်မှာ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ဖြုတ်တော့တာပါပဲ။ (ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေး အားတိုးဆေးမြီတိုကြီးကို မပြောသေးပါဘူး)။ အလုပ်သမားတွေ မိသားစုတွေကလည်း အလုပ်မပြုတ်ခင်နဲ့ အလုပ်ပြုတ်ချိန်မှာ အသုံးစာရိတ်တွေကို အကြီးအကျယ် လျော့ချလိုက်တော့တာပါပဲ။ စိစစ်ချွေတာလိုက်တော့တာပါပဲ။ အဲသည်မှာ လုပ်ငန်းတွေလည်း ၀င်ငွေတွေ ကျဆင်းကုန်ပြီး အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြလို့ လုပ်ငန်းတွေ ပြုတ်ကုန်ကြတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်ကလည်း အခွန်ဝင်ငွေတွေနဲ့ ရပ်တည်နေရတော့ အခွန်တိုးတာ၊ သူတို့ရဲ့ ပညာရေး၊ အစိုးရ အဆောက်အအုံစာရိတ်တွေကို လျော့ချတော့တာပါပဲ။ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ။ စီးပွားက ပျက်သထက်ပျက်၊ ညဥ့်နက်ထက် နက်ကုန်ပြီပေါ့။
တကယ်ကတော့ စီးပွားရေး ကျမ်းဂန်များအဆိုအရ စာရိတ်တွေ အသုံးတွေ ဈေးနှုန်းတွေ အကြီးအကျယ် ဖောင်းပွ မြင့်တက်နေလို့ စီးပွားရေးကျလာပြီဆိုရင်ဖြင့် အဲသည် ဈေးနှုန်းတွေလည်း ကျဆင်းဖို့ အချိန်ကို ရောက်လာရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၄ သိန်းတန် လုပ်ငန်းက ၄ ထောင်တန် အလုပ်သမားကို ဖြုတ်လိုက်ပေမယ့် သူ့ရောင်းနေတဲ့ ပစ္စည်းကို တခု ၄၀၀ ကနေ မလျော့သေးပဲ ဆက်ရောင်းနေဦးမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါက တရားတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ သူ့ ၄၀၀ တန် ပစ္စည်းကိုလည်း ၃၀၀ လောက်နဲ့ ချရောင်းဖို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမှာပါတဲ့။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်းစာရိတ်လည်း ကျ၊ သူ့ပစ္စည်းဈေးလည်း ကျပြီး ကျဈေးနဲ့ ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းကို ပြန်ဝယ်လာနိုင်တဲ့ ဦးမော့မှု ဖော်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မြန်မာပြည်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က လဘက်ရည် ၁ ခွက် ၁ ကျပ်က အခု ၂၀၀ လောက် အဖြစ် မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးလည်း မြင့်တက်လျက် ရှိပါတယ်။ လစာကတော့ တိုးလာတယ် မရှိ၊ တန့်နေတာများပါတယ်။ မတိုးရဲဘူးတဲ့ လစာတိုးသံကြားရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ဈေးတွေ တင်လွန်းလို့တဲ့။ ဖြစ်ပုံ။
ခုချိန်မှာတော့ စားသုံးသူတွေက သူတို့ရဲ့ ဖောင်းပွတဲ့ အသုံးစာရိတ်တွေကို စိစစ်လိုက်ပါပြီ။ ကော်ဖီတခွက် ၁ ဒေါ်လာ ၆၅ ပြားကနေ ၁ ဒေါ်လာတန် ကော်ဖီ ပြောင်းသောက်နေကြပါပြီ။ ရိပ်မိတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ သူတို့ ပစ္စည်း၊ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ နည်းပညာကို ဈေးချပေးရတော့မှာကို သဘောပေါက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ကြဖို့သာ ရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်တဲ့။ အခု ကျနော်ရှင်းပြတာက လြူပိန်းတွေအတွက် ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ပြီးတော့ ရှိတဲ့ဉာဏ် ၂ ပြားဖိုးလောက်နဲ့ ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ မောင်ရစ်တို့က ဒေ၀ါလီမောင်ရစ်ဆိုတော့ မာမာပဲလို့ ထင်ကြမယ်။ မာတော့ မမာဘူး။ လန့်လန့်ပဲဗျ။ စီးပွားပျက်ကပ်က ကူးစက်တတ်တယ်။ လန့်ပြီးတော့လည်း လူတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေ နိုင်ငံတွေက ကျဆုံးတတ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားဘာဆိုလား ဘဏ်တခုရှိဖူးတယ်။ အာရှသားတွေရဲ့ ဖောက်သည်ကြီး။ အဲသည်မှာ အဲဒီဘဏ်တွေ အရှုံးပြနေပြီ ဘာညာဆိုပြီး ကောလဟလထွက်လာလိုက်တာ။ အာရှသားတွေက အထူးသဖြင့် ထိတ်လန့် ပြာယာခတ်ပြီး ငွေတွေ ပြန်ထုတ်ကြတော့တာပဲတဲ့။ ဘဏ်ကော၊ ပြည်နယ်ကကော၊ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ကကော ၀င်ပြီး ဘယ်လိုရှင်းရှင်း မရဘူးတဲ့။ ဒီဘဏ်က အာမခံထားတဲ့ဘဏ်၊ ရှုံးရင်တောင်မှ အာမခံကုမ္မဏီက ၀င်ရှင်းမှာ၊ မရှင်းနိုင်ရင် အစိုးရက ရှင်းပေးမှာလို့ ဘယ်လိုပြောပြော အာရှသားတွေက လက်မခံဘဲနဲ့ အဲဒီဘဏ်တွေရှေ့မှာ နေ့နေ့ ညည တန်းစီးပြီး ငွေပြန်ထုတ်လိုက်ကြတာ လမ်းပေါ်မှာ လူတန်းရှည်ကြီးနဲ့ ရဲတောင် ခေါ်ရသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အဲဒီဘဏ်လည်း ပြုတ်သွားလေရော တဲ့။
အခုအချိန်မှာ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုတဲ့အသံဟာ တော်လဲသံလို တချို့လူတွေကို လိပ်ပြာလွင့်စေပါတယ်။ အဲဒီရဲ့ အဆိုးဂယက်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့၊ ကာပြန်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တွေက သတိကြီးစွာနဲ့ စီးပွားရေးအားတိုးဆေးကြီးကို ဖော်ပြီး တိုင်းပြည်ကို တိုက်ဖို့ လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေ၀ါလီမောင်ရစ်ဆိုတဲ့ ကလောင်နံမယ်ကတော့ မြန်မာပီပီ ယတြာချေတဲ့အနေနဲ့ ကျိန်းကျေအောင် အစီအမံလုပ်ပြီး အမြော်အမြင်နဲ့ ပေးတဲ့နံမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေနဲ့ သူတို့အစိုးရက မောင်ရစ်တို့လို ယတြာတွေ၊ ဗေဒင်တွေ၊ ဘိုးတော်တွေ၊ ဘာတွေ ညာတွေ အယုံအကြည်မရှိတာ သိပ်ဆိုးတာပဲ။ အခုလို စီးပွားပျက်နေချိန်မှာ သူတို့တတွေ ဒါမျိုးအစီအမံတွေ မလုပ်ကြတာကလေး တခုပဲ လိုနေတယ်လို့ ဟိုလူကြီး အိုဘားမားကို ပြောအုံးမှနဲ့ တူပါရဲ့။ အော် … အမေရိကန်မှာ ကြက်ဆူပင် စိုက်ဖို့များ လိုနေသလားလို့ မေးကြည့်အုံးမှ …
2 Responses to မောင်ရစ် – အမေရိကန်တွေ စီးပွားပျက်နေကြပုံ ဘာလဲ ဘယ်လဲ
ko metta on September 6, 2014 at 4:53 am
အဖေဘွတ်က သုံးဖြုန်းလိုက်။ ကလင်တွန်က ပြန်ရှာပေးလိုက်။ သားဘွတ်က သုံးလိုက်ပြန်၊ အိုဘားမားက ပြန်ရှာပေးလိုက်… အမေရိကန်-ဆိုရှယ်စီကရူတီ ဘဏ်ကြီးလဲယိုပေါက်တွေအများကြီးနဲ့၊ ထောင်သားတွေကလည်း များလွန်း။ သေချာတာတော့ နောက်ထပ်အနှစ်၃၀ ကျနော်တို့အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလ…အမေရိကန်၊ကမ္ဘာ့စစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ် ရှိနေဦးမှာ၊ စီးပွားထိပ်တန်း၊ ပညာရေးထိပ်တန်းအဖြစ် ရှိနေဦးမှာပါ… အမေရိကားရောက်၊ ရွှေမြန်မာတို့ စားသောက်၊ပျော်ပါး၊စုဆောင်းနေတာထက်… မြန်မာအချင်းချင်းဘယ်လောက်ရိုင်းပင်းနိုင်မလဲ။ ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကားရောက်၊ မြန်မာများ အလယ်အပတ်သွားကြ၊ တတ်နိုင်သရွှေ့ကူညီဖေးမေ ..မျှော်လင့်ပါတယ်။ အမေရိကားက တရက်လုပ်စာ ဒေါ်လာ၁၀၀ … ရန်ကုန်မှာ၊ အများစုရဲ့တစ်လစာ လစာဖြစ်နေပါတယ်။ တလ ..ဒေါ်လ၂၀၀ ချွေတာနိုင်ရင်၊ မြန်မာပြည်အကျိုးလုပ်နေတဲ့ ရှစ်လေးလုံးအဖွဲ့ လူ၂ယောက်၊ လစာပံ့ပိုးပေးပြီး ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကား..စီးပွားပြန်ကောင်းလာပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ အိုး… ဘားမား ..လို့အော်ဟစ်ခဲ့ပြီး၊ အိုဘားမား တက်လာတယ်။ အိုဘားမား ခေတ်မှာ ဘားမား-အမေရိကား ရန်သူဘဝက၊ မိတ်ဆွေဘဝကို ရောက်လာပါတယ်။ ကောင်းလေစွ…။
Catwoman on September 6, 2014 at 7:40 am
Yes when we are 65 there won’t be any money left in the social security / Medicare for us. When Medicare was started lifespan was 65 but now people live longer and so they use up more money.
Jobs are hard to find and most only hire part time so they don’t have to pay benefits. But there ll always be jobs in the health care sector since people are living longer and they get sick.
Yes people makealot of money in the us but we also pay lots of taxes and everything is expensive.